एलन मस्क ट्वीटरको निर्देशक बन्दै
Bhuwan Chaulagain6April 2022
एजेन्सी । सोसल मिडिया कम्पनी ट्वीटरको करीब ३ अर्ब डलरको शेयर खरीद गरेर सबैभन्दा ठूलो शेयरधनी बनेका विश्वका नम्बर वान अर्बपति एलन मस्क ट्वीटरको निर्देशक बोर्डमा मनोनित हुने भएका छन् ।
ट्वीटरको ९.२ प्रतिशत शेयर खरीद गरेका टेस्ला कम्पनीका प्रमुख एलन मस्कलाई ट्वीटरको बोर्डमा मनोनित गरिने कम्पनीले मंगलबार जनाएको छ ।
उक्त मनोनयनसँगै ट्वीटर कम्पनीमाथि कब्जा जमाउने एलन मस्कको प्रयास तत्कालका लागि रोकिने बताइएको छ । कतिपय विश्लेषकहरुले खर्बपति मस्कले ट्वीटर कम्पनी नै खरीद गर्ने योजना बनाइरहेको अनुमान गरेका थिए ।
ट्वीटरको निर्देशक बोर्डको सदस्य बनेसँगै अब मस्कले कम्पनीको १४.९ प्रतिशत भन्दा धेरै साधारण शेयर शेयर खरीद गर्न पाउने छैनन् ।
ट्वीटरका सिइओ पराग अग्रवालले मस्कको मनोनयनका बारेमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्– एलन मस्कलाई हाम्रो बोर्डमा मनोनयन गर्न गैरहेको कुरा बताउन पाउँदा हामी उत्साहित छौं । उनी धैर्यवान विश्वासकर्ता र प्रदत्त सेवाका विषयमा कठोर आलोचक पनि हुुन् जसको हामीलाई ट्वीटरमा खाँचो छ । यसले हामीलाई दीर्घकालमा झनै बलियो बनाउनेछ ।
पराग अग्रवालको ट्वीटको जवाफमा एलन मस्कले पनि ट्वीट गरेका छन् । जसमा उनले लेखेका छन्– आगामी महिनाहरुमा ट्वीटरमा उल्लेख्य सुधार गर्नका लागि पराग र ट्वीटर बोर्डमा सँगै रहेर काम गर्ने प्रतिक्षामा छु ।
आफूलाई वाक स्वतन्त्रताका हिमायती भन्ने एलन मस्क सोसल मिडिया प्लाटफर्महरु र यसका नीतिहरुका आलोचक हुन् । हालै उनले ट्वीटरले वाक स्वतन्त्रताको सिद्धान्तको पालना गरेरनगरेको विषयमा ट्वीटरमा मत सर्भेक्षण गरेका थिए ।
ट्वीटरको ७ करोड ३५ लाख कित्ता शेयर किनेर सबैभन्दा ठूलो शेयरहोल्डर बनेसँगै सोमबार उनले ट्वीटरमा एक अर्को मतसर्भेक्षण राखे । जसमा उनले ट्वीटरमा बहुप्रतिक्षित भ्मष्त बटन राख्नु आवश्यक रहेरनरहेको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
इन्टरनेट सेवामा लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति
लगानी तान्दै प्रविधि कम्पनी
मस्कलेआफ्नै नयाँ सोसल मिडिया ल्याउँदै
आज राति बृहस्पति र शनिलाई सहजै देख्न सकिने
पाँचवर्षमा चीनले कृत्रिम वर्षा र हिमपात गराउन सक्छ !
सञ्चारमन्त्री गुरुङको सञ्चारविज्ञमा दोलखाका पत्रकार मानन्धर नियुक्त
डबिङ विज्ञापन प्रसारण गर्नेलाई कारबाहीको तयारी
विज्ञापनरहित पूर्ण रुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि शुल्क बढ्न सक्छ : क्लिनफिड व्यवसायी
अध्यक्ष/प्रधान सम्पादक - बज्र सिं लामा
सम्पादक - बिशाल कोइराला
सुचना बिभाग दर्ता नं. ३१८४–२०७८/७९